NOO SHEEG SIDA AAD KU XALISAY
Naga caawi inaan fahamno baahiyaha isbeddelaya ee ka jira magaalooyinka waaweyn ee mataanaha ah
Ka qaybqaado adigoo adeegsinaya ablikeeshinka taleefoonkeena casriga ah
Soo dejiso ablikeeshinka taleefoonka casriga ah, rMove, oo ku gal koodhkaaga gelitaanka.
Kaliya ka hadal noloshaada. rMove ayaa ku galin doontaa safarkaaga wuxuuna ku weydiin doonaa su'aalo ku saabsan safaradaada hal toddobaad.
Guji 'Log in' hoose si aad u gasho ra’yi uruurinta onlaynka ah.
Ama haddii aad doorbido, nagasoo soo wac khadka bilaashka ah si aad u dhammaystirto daraasadda 1-888-476-6157.
Ma lumisay koodhkaaga isticmaalka? Haddii aad lumisay casuumaadda koodhkaaga gelitaanka, fadlan nala soo xirii waana ku caawin kartnaa.
Ku saabsan daraasadda
Waa maxay Travel Behavior Inventory?
Tilmaamaha Dhacanka Liiska Socdaalka waa ra'yi uruurin qoys oo uruuriya dadka, dhaqdhaqaaqyada safarka maalinlaha ah, iyo qaababka gaadiidka caadiga ah ee dadka ku nool aagga magaalooyinka Mataanaha ah Macluumaadkani wuxuu muhiim u yahay hay'adaha qorsheynta ee heer gobol iyo heer degmo si ay u fahmaan sida koritaanka bulshada, horumarka, iyo isbeddelada kaleba ay u saameeyaan nidaamka gaadiidka. Gaadiid la isku halleyn karo iyo xulashooyin socdaal oo macquul ah ayaa gacan ka geysta tayada nolosha gobolka iyo firfircoonida dhaqaale. Xogta ra'yi uruurinta iyo warbixinada ayaa ka caawin doona wakaaladaha inay soo bandhigaan maalgashi gaadiid wax ku ool ah, soona saaraan codsiyada deeqda ah ee federaalka, isla markaana mudnaanta la siiyo hagaajinta ku habboon baahida gobolka..
Daraasaddan waxaa kafaalo qaadaya Metropolitan Council oo kaashanaya Minnesota Department of Transportation iyo Wisconsin Department of Transportation.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan daraasaddan, fadlan booqo su’aalaheena badanaa lauswaydiiyo or nala soo xiriir.
Wax su’aalo ah ma qabtaa? Halkan ka biloow.
Muxuu ku saabsan yahay daraasaddan?
Waxaan dooneynaa inaan barano sida, goorta, meesha, iyo sababta ay dadku ugu safraan ama ugu wareegaan gobolka magaalooyinka mataanaha ah. Waxaan kaa codsaneynaa inaad diiwaangeliso safarkaaga si aad nooga caawiso inaan fahamno qaababka gaadiidka gobolka. Kaqaybqaadashaada waxaad naga caawin kartaa qorshaynta horumarka gaadiidka mustaqbalka ee bulshadaada.
Maxaan uga qayb galaa?
Kaqeybqaadashadaadu waxay hubineysaa in qoysaska sida kuwaada oo kale ay kaqeybqaataan qorshooyinkayada gaadiidka gobolka. Talladaadu waxay leedahay saameyn weyn maxaa yeelay qoysas kooban ayaa lagu casuumay inay kaqeyb qaataan.
Sidee ayaa laygu xushay inaan kaqaybqaato?
Qoysaska la casuumay ayaa si aan kala sooc lahayn looga xushay gobolka Magaalooyinka Mataanaha ah.
Yaa kafaala qaadaya daraasaddan?
Waqti intee le'eg ayay qaadataa inaan ka-qaybqaato?
Waxay qaadataa ilaa 10 daqiiqo in layska qoro daraasadda. Markaad isqorto, waxaan ku siin doonaa tilmaamo aad ku gasho safarkaaga iyo dhameystirka daraasadda. Qoysaska ka gala safarkooda toddobada maalmood ablikeeshinka taleefoonka casriga ah, rMove, waxay ku qaadan doonaan qiyaastii 5-10 daqiiqo maalin kasta ayagoo ka warbixinayo safarkooda. Qoysaska ka soo gala safarkooda onlaynka ama khadka taleefanka waxay ku qaadan doonaan 10 daqiiqo xubin kasta oo reerka ka mid ah oo ka warbixinaya safarkooda hal maalin.
Maxaan helayaa markaan kaqaybqaato?
Haddii reerkaagu kaqeybqaato ayagoo isticmaalaya ablikeeshinka taleefoonka casriga ah, rMove, qof kasta oo qaangaar ah oo kaqeybgalaya ayaa heli doona kaarka hadiyadda (tusaale ahaan, qoys ay la socdaan laba qof oo waaweyn ayaa hela laba kaararka hadiyadda). Reeraha ku soo sheegaya safarkooda onlayn ama soo wacaya waxay heli doonaan hal kaar oo hadiyad ah.
Ka waran hadaana waxbadan aana safrin?
Qadar kasta oo safar ah (xitaa haddii aadan sameyn wax safar ah) waxay naga caawin doontaa inaan horumarino qorsheynta gaadiidka gobolka. Ha iloobin safarada gaagaaban, sida la lugeynta eeyga, sidoo kale tirinta.
Ka waran haddii caadooyinka gaadiidkayga inta lagu jiro daraasadda aysan aheyn caadooyinkeyga caadiga ah?
Taasi wax dhib ah maahan - wali waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad kaqeybqaadato. Waxaan sidoo kale wax kaa weydiin doonnaa caadooyinkaaga caadiga ah ee safarka, sida safarkaagu isu beddelay sanadkii la soo dhaafay, iyo sida aad u maleynaysid inaad u safri doontid mustaqbalka.
Waxaa laygu casuumay inaan isticmaalo ablikeeshinka taleefoonla casriga ah ee casriga ah, rMove. Sidee ayay u shaqaysaa?
Ka dib markaad soo dejisoto rMove oo aad iska diwaangaliso, rMove waxay galin donaan safaradaada hal toddobaad intaad ku guda jirto nolol maalmeedkaaga. Maalin kasta waxaa lagaa codsan doonaa inaad dhameystirto ra'yi uruurin maalinle ah oo kooban oo ku saabsan caadooyinkaaga safarka iyo sidoo kale sahaminta safarka ee ku saabsan safar kasta oo aad sameyso.
Sidee loo ilaaliyaa asturnaantayda shaqsi ee gaarka ah?
Waxaa naga go'an inaan ilaalino sirta, sharafta, iyo amniga macluumaadkaaga qaaska ah. Waxaan u qaadaneynaa mas'uuliyaddan si adag. Ma siideyn doonno ama lama wadaagi doonno macluumaadka shakhsiga ah ee aan kaa soo aruurinno marka laga reebo sida sharcigu qabo. Siyaasadeena Asturnaanta waxaa loogu talagalay inay kaa caawiso inaad fahamto sida aan u ururino una ilaalino macluumaadkaaga. Si aad u aqriso dukumintiga asturnaanta oo dhamaystiran, booqo MSPtravelstudy.org.
Sidee loo adeegsadaa natiijooyinka daraasadda?
Natiijooyinka daraasaddu waxay ka caawin doontaa qorsheeyeyaasha maxalliga ah iyo kuwa gobolku inay fahmaan sida safarka maalinlaha ah ugu kala duwan yahay gobolka oo dhan. Maaddaama tiknoolajiyada iyo sida dadku u wareegaan ay isasii beddelayso, natiijooyinka daraasadda ayaa ka caawin doonta hay'adaha inay soo-jeediyaaan maal-gelinno gaadiid oo wax ku ool ah, soo-saaridda codsiyada deeqaha federaalka ee tartamaya, iyo mudnaanta sii hagaajinta ugu habboon baahiyaha gobolka.
Haddii aad qabtid su'aalo ku saabsan daraasadda ama sida looga qaybqaato, fadlan nala soo xiriir. Waxaan halkan u joognaa inaan ku caawinno.
Gudbi codsi taageero
Magac ama xaraf*
Sideen kuu caawin karnaa?*
Dhibaato ayaa ka jirtay gudbinta dalabkaaga. Fadlan hubi in dhammaan qaybaha loo baahan yahay ee kor ku xusan la buuxiyey oo iskuday markale.
Mahadsanid! Waan kula soo xiriiri doobaa mardhaw.
bogga u horeeya
© 2021, Resource Systems Group, Inc. loogu talagalay Metropolitan Council